Archive du 20161212
Augustin Andriamananoro Nosamborina teny am-pasana
Vitan�ny fitondrana Rajaonarimampianina ny COMESA, tontosany ny Frank�f�nia, ary farany teo dia nahazo fampanantenana famatsiam-bola mitentina 10 miliara d�lara avy amin�ny mpamatsy vola, dia io fa mamboly korontana nefa vao eo no niantsoantso sy nitalaholaho fitoniana.
Marc Ravalomanana Efa mitsinjo lavitra
Fety roa sosona ny an�i Marc Ravalomanana anio. Feno 67 taona katroka amin�ity 12 desambra 2016 mantsy ny tenany, ary anio ity ihany koa no hisokafan�ny tranombarotra Tiko �AAA�
Raharaha radio Jupiter-Ilakaka Roalahy notanana am-ponja, karohina ilay mpanao gazety
Mbola miafina fatratra amin�izao fotoana izao ny mpanao gazetin�ny radio Jupiter ao Ilakaka, Fernand Celo, raha ny vaovao naeliny tao amin�ny tambazotran-tranonkala iray ny faran�ny herinandro teo.
Fisamborana an�I Augustin Andriamananoro Andrasana ny fanehoan-kevitr�I Andry Rajoelina
Mitana ny sain�ny maro ankehitriny ny nisamborana an�I Augustin Andriamananoro, iray amin�ireo olona akaiky ny filohan�ny Tetezamita teo aloha Andry Rajoelina.
Didier Ratsiraka Vonona hiatrika fifidianana
� Vonona hiatrika ny fifidianana ho avy rehetra eo ny Arema saingy tokony hovaina ny lalampanorenana misy amin�izao hisian�ny fifidianana malalaka sy mangarahara �.
Krizy 2009 Nampihisatra ny fanapariaham-pahefana
Tena zava-dehibe ny nanindrian�ny filoha mpiara-mitantana ny AVCOI (Association des Villes et Collectivit�s de l�Oc�an Indien) vaovao Ravalomanana Lalao ny fiaraha-miasa matotra amin�ireo mpamatsy vola hampiova ny endriky ny tan�na sy ny fiainan�ny mponina ao aminy, hoy ny tompon�andraikitra mpitantana ny OPCI-FIFTAMA (Organisme Public de Coop�ration Intercommunale -
Tsy sanatria manenji-dresy ry Jean fa ianareo izao no tonga amin�ilay fitenena hoe ny tody tsy misy fa ny atao no miverina a!
Donald Trump Tsy mari-toerana sahady
Izay tsikera tsy mahazo ny filoha amerikanina vaovao, Donald Trump, amin�izao fotoana izao no manenina. Ankoatry ny laza ho mivatambatam-piteny sy fihetsika izay efa nahafantarana azy fony mbola tsy kandida akory, nisy aza moa ny tsikera nandeha fa boto-fiaina mihitsy ity tompon�ny trano fotsy vaovao ity dia mitombo indray amin�izao fotoana izao ny vesatra hanenjehan�ny ankolafy isan-karazany ity filoha ity.
Fitarafana taova Ny vehivavy no marisika manatona dokotera
Anisan�ny fomba iray hahafahana mamantatra ny toe-pahasalaman�ny olona iray ny fitarafana ny taova any anaty, amin�ny alalan�ny � �chographie � ohatra.
Fanomezana faran�ny taona Mpanjifa miisa 24 mampifalifalian�ny Airtel
Mitohy hatrany ny hetsika � Tanteraka ny nofiko �, karakarain�ny orinasam-pifandraisana Airtel entina hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa amin�izao ankatoky ny Krismasy sy ny fetin�ny faran�ny taona izao.
Mahajanga Vaky ny adin'ny samy Silamo
Mafampana ny toe-draharaha ao Mahajanga ankehitriny. Raikitra ny adim-pinoana amin'ny samy Silamo, tsy nisy ankinafinafina intsony ny zoma lasa teo fa samy nivoaka naneho ny heviny nampiantso mpanao gazety ny Chiite sy ny Sunnite.
Raha nahavaha olana angamba ny fanamelohana izay hetsika sy fihetsika nolazaina fa hoe : tsy manaja ny zon�olombelona na koa heloka bevava eo anatrehan�izao tontolo izao dia efa tanteraka tahaka izay ny tononkiram-pirenentsika hoe :